3 duco oo xoog leh si aad shaqadaada dib ugu hesho ?
3 ducooyin awood leh si shaqada dib loogu helo. Shaqada had iyo jeer waa sabab walwal leh, xitaa kuwa shaqadii lumay aad bay u jeclaayeen. Su'aasha "laakiin maxaan khaldamay?" Maskaxdeenna kama gudubno oo waxaan su’aal gelinaa awooddeena. Laakiin runtu waxay tahay, badiyaa sababta shaqo ka fadhiisiyuhu wax shaqo ah kuma laha oo waxay u dhacday sababo ka baxsan xukunkaaga. Khayaanada waa adag tahay wayna adagtahay in laqabto, sidaa darteed waxaan rabnaa inaan ku siino xoog yar oo aad ku soo celiso shaqadii kaa luntay. Fiiri 3 weedho awood-u-laabasho shaqo oo kaa caawiya sidii aad uga soo bixi lahayd shaqadaadii hore.
1 3 ducooyin awood leh si shaqada dib loogu helo
2 Salaadda inuu ka soo kabsado shaqada iyada oo wax shafeeca ah quduusiinta dhowr
3 Ducada si aad uga soo ceshato shaqada shafeeca ah ee San Antonio
4 Salaadda la xaawilayo in shaqada la shafeeca ah ee St. Cyprian
Eeg sidoo kale waxyaabo kale oo ku saabsan damqashada, cibaadooyinka iyo ducooyinka dunida foosha:
Salaadda inuu ka soo kabsado shaqada iyada oo wax shafeeca ah quduusiinta dhowr
Oh! Hooyo Qaali ah Marwadayada Aparecida Oh Rita Quduuska ah ee Cassia Oh My sharafta leh San Yahuza Tadeo, ilaaliyaha sababaha aan macquul ahayn. Santo Expedito, oo ah awliyihii daqiiqadii ugu dambeysay iyo Saint Edwiges, oo ah waliinka saboolka baahan ee Aabbaha ii duceeya (magacaaga oo dhan sii) Waxaan ka codsanayaa inuu iga caawiyo sidii aan ugu laaban lahaa shaqadayda si ay mar labaad ii soo wacaan, si deg deg ah. Waan ku ammaanayaa waana ku ammaanayaa marwalba waan kuu sujuudi doonaa. U soo ducee: 1 Aabbahayaga iyo 3da Baddoodba Waxaan Ilaahay ku aaminay xooggayga oo dhan, waxaanan ka codsanayaa inuu ii iftiimiyo waddadayda iyo noloshayda, Aamiin.
Tan dheh salaadda 3 maalmood oo isku xigta, haddii ay suurtagal tahay waqti isku mid ah. Sidoo kale dooro meel deggan oo xasilloon halkaas oo aan laguugu carqaladeyn doonin, si aad si buuxda diiradda ugu saarto ulajeeddadaada hab wanaagsan oo leh iimaan iyo hubaal in nimcadan lagu gaadhi doono.
Ducada si aad uga soo ceshato shaqada shafeeca ah ee San Antonio
«Haddii aad rabto mucjisooyin, Tag San Antonio, Waxaad ka carari doontaa shaydaanka Iyo jirrooyinka dhalmada. Dib u soo cesho kii lumay Xabsigii adkaa wuu jebiyaa, Oo markii duufaanta aad u sarrayso u bax badda dhibta leh. Iyada oo shafeecaada Belaayada, qaladka, geerida cararaa, Kuwa itaalka daran way xoogoodaan Oo waxay noqdaan kuwa caafimaad qaba. Soo celi wixii lumay ... (ku celi 3 jeer) Dhammaan xumaanta aadanaha Dhexdhexaad, dib u gurasho, Noo sheeg cidda aragtay; Marka waxaad dhahdaa Paduan. Soo celi wixii lumay ... (ku celi 3 jeer) Ammaan Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Sidii ay ahayd bilowgii, hadda iyo had iyo goorba Aamiin. Soo celi wixii lumay… (ku celi 3 jeer) V. Noo soo ducee, Saint Anthony. A. Waxaan u qalmi karnaa balan qaadyada Masiixa. Soo celi wixii lumay… (ku celi 3 jeer) U soo ducee Aabbahayo iyo Marwo Barakeysan.
Tan dheh salaadda maalin walba ama hadba sida loogu baahdo, oo nal shid shumac mahadnaq ah oo leh Saint Anthony markii nimcadu la gaadho Saint Anthony waa Saint taas oo ah inaan u baahanahay wax lumay, sidaa darteed waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa tan duco jacayl, ujeedo, lacag ama xaalad kasta oo u baahan dib u soo kabasho.
Salaadda la xaawilayo in shaqada la shafeeca ah ee St. Cyprian
“Santo Antonio waa geed Mandingo, Santo Onofre waa geed Mirongueiro. Oh, oh, my Cyprus my waliyigayga ... Ninka madow ee yaqaan sida loo sixro wanaagsan U samee aamusnaan, wax yar buu hadlaa oo waa waalan yahay! ”San Cipriano, mahadsanid. In suurtagalnimada in aan (magacaaga oo dhan sheego) aan helo shaqada aan rabo (sheeg magaca shirkadaada) ka weyn imisa qof ayaa akhrin doonta fariintan! Saint Cyprian, sixirroole iyo Christian, xaq iyo sharrow, aqoon iyo xukuma farshaxankiisa diineed, waxaan kuugu baaqayaa qalbigayga, jidhkayga, nafteyda iyo noloshayda oo dhan si aad u gaarto hadafka ah inaan shaqadan dib u helo (sheeg magaca shirkada). Waxaan ka codsanayaa dhammaan xoogagga sare ee Saddexmidnimada Quduuska ah, xoogagga badda, hawada, dabka, dabeecadda iyo adduunkaba inay ka dhigaan shaqadan inay ku dhacaan gacmahayga oo ay gebi ahaanba aniga igu xidhnaato (sheeg magacaaga oo buuxa). Shaqadani ha ku dhacdo (magaca shirkada dheh) anigaa iska leh weligay, in AWOODAN KARIIMKA ah shaqadan cid kale yeelan karin aniga mooye (sheeg magacaaga oo buuxa). Sarkaalka shaqaalaynta ha u arko musharaxiin kale aniga mooye (sheeg magacaaga oo buuxa). Ilaa iyo inta maareeyaha shaqaalayntu uusan i soo wicin (magacaaga oo dhan sheeg) si aan kuugu sheego in shaqadu tayda tahay, ma farxi doonaan oo markasta oo ay magacayga maqlaan (magacaaga oo dhan sheeg) way hubsan doonaan inaan ahay qofka lala xiriirayo . shaqada Ariga mucjisada ah ee buurta fuulay, ii keen shaqada (aan dhahno magaca shirkadda) ee aan u baahanahay oo aan u hanweynaa. Saas ha ahaato, waa la yeeli doonaa, waa la yeeli doonaa. Waxaan aaminsanahay oo aan heli doonaa shaqada aan ka rabo aniga (magacaaga oo buuxa) weligood ”.
Tan tukashadu waa mid aad u awood badan waana in la sameeyaa inta lagu gudajiro 3 maalmood isla mar ahaantaana leh iimaan weyn iyo xasilnaan! Qaado daqiiqado yar si aad uga fikirto noloshaada dhabta ah ee cusub, iyada oo dhammaan farxadda aad ku soo laabato shaqadii hore ay kuu keeni doonto. Haddii aad runtii go'aamisay in ku laabashada shaqadaadii hore ay tahay ikhtiyaarka ugu fiican, iska hubi 4ta hablood ee nacasnimada ah si aad shaqadaada dib ugu hesho una sii xoojiso dalabkaaga.
Fiiri laba salaadood oo awood leh si aad u hesho shaqooyin degdeg ah